Baaghi 2 – Filimside.net
Inaba caadi ma ahan 2018 waa sanad Bollywood-ka macaash waali ah guranayaan waana sanad marnaba aysan fanka Hindiya hilmaami doonin waxaana dib u bilaawday xiligii barwaaqada ee fanka Hindiya caan ku ahaayeen inta aan qarnigaan […]
Business Update: Baaghi 2 ganacsigiisa gudaha Hindiya, suuqyada caalamka iyo wadarta guud halka uu maraayo
May 3, 2018 Zakarie Abdi
Tiger Shroff filimkiisa Baaghi 2 ayaa weli ganacsi sameenayo asigoo haatan maraayo 159 Crore mudo 5-todobaad oo uu tiyaatarada saaran yahay waxaana hubaal ah inuu ganacsigiisa 160 Crore ku istaagi doono. Inkastoo filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – […]
Baaghi 2 v Infinity War isku bar bar dhig lagu sameeyay maalinta kowaad gudaha Hindiya ganacsigooda
April 29, 2018 Zakarie Abdi
Avengers – Infinity War ayaa noqday maalinta kowaad filimka lacagaha ugu badan gudaha Hindiya kasoo xareeyo sanadkaan 2018 wuxuuna 6 Crore dheeraaday filimka Baaghi 2 oo rikoorkan sanadkaan heestay. Avengers – Infinity War wuxuu Baaghi […]
Shabakada Boxoffice India ayaa si rasmi ah usoo bandhigtay 10-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen isku darka gudaha Hindiya daafaha caalamka. Filimka Padmaavat ayaa lacagaha ugu badan sanadkaan 2018 soo xareeyay wuxuuna keenay 545 […]
Rasmi: filimka Baaghi 2 iyo mudo sedex todobaad ah ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
Tiger Shroff filimkiisa Baaghi 2 ayaa keenay 10.50 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa sedexaad taasi oo ka dhigtay wadarta guud inuu soo xareeyay 154 Crore (Trade Figure) mudo 21-maalmood. Baaghi 2 waa filimka 19-aad ee lacagaha ugu badan ebid soo […]
Baaghi 2 oo ku socdo todobaadkiisa sedexaad inuu ganacsi adag sameeyo
April 18, 2018 Zakarie Abdi
Tiger Shroff filimkiisa Baaghi 2 ayaa ku socdo inuu ganacsi adag sameeyo todobaadkiisa sedexaad wuxuuna keeni doonaa 10.50 Crore. Baaghi 2 hadda mudo shan maalmood uu ka qabo todobaadkiisa sedexaad wuxuu keenay 8.75 Crore (Trade Figure) taasi oo […]
Maqaal: Akshay Kumar iyo Varun Dhawan waxaa garaacay Tiger iyo darajada 150 Crore atoorayaasha gaareen
Hogaamiyaha dhalinta Bollywood-ka Tiger Shroff ayaa darajo cusub ku talaabsaday madaama filimkiisa Baaghi 2 150 Crore Boxoffice-ka kasoo xareeyayo mudo 17-maalmood ah. Baaghi 2 waa filimka 19-aad ee darajadaan gaaro sidoo kalena waa filimka miisaaniyada […]
Rasmi: filimka Baaghi 2 oo 150 Crore soo xareeyay mudo 17-maalmood
Tiger Shroff filimkiisa Baaghi 2 ayaa darajo cusub ku talaabsaday madaama uu 150 Crore kusoo xareeyay mudo 17-maalmood ah waana filimka 19-aad ee darajadaan gaaro. Baaghi 2 wuxuu ku socdaa cimri ahaantiisa inuu 160 Crore gaaro madaama […]